အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ်များအတွက်မြန်ရဲ့ login & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ်များအတွက်မြန်ရဲ့ login & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ် APK ကိုအဘို့အစာရှောင်ခြင်းရဲ့ login & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
Fast ACCESS, လုံခြုံမှုဒေတာ, SMART SYSTEM, ဆန့်ကျင် SPAM, login multiple accounts: ဒီနည်းကို features တွေနှင့်အတူ 2019 ၌စျေးကွက် APP ကို ​​ON Gmail နဲ့အခြား Mail အတွက်အကောင်းဆုံးကို EMAIL အခမဲ့ app IS ။
💌ဘာကြောင့်အစားအခြားသတင်းများအခမဲ့အီးမေးလ်အက်ပ်များ၏ AVN EMAIL ကိုရွေးချယ်သင့်သနည်း
☆ Fast ACCESS - ဒီ application ကိုအီးမေးလ် data နဲ့ gmail ကအတွက်အော်တိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုမှနိမိတ်လက္ခဏာကိုထောကျပံ့ဖို့စာကြည့်တိုက်များအသုံးပြုသည်။
☆ Intelligence ကို EMAIL SYSTEM - စက်မှုစနစ်သင်ယူခြင်းလွယ်ကူသောလော့ဂ်နှင့်ပျက်ယွင်းနေအီးမေးလ်များအတွက်သစ်ခုတ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချစေသည်။
☆ဆန့်ကျင် SPAM - စက်သင်ယူမှု algorithm ကိုမှတဆင့် Anti-spam များကိုပံ့ပိုး။
☆အော်တို login gmail ကို: အီးမေးလ်ရဲ့ password ကိုမပါဘဲ gmail ကအတွက်ဂျီမေးလ် OAuth အော်တိုနိမိတ်လက္ခဏာကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အလိုအလျှောက်ပါ။
☆လက်မှတ် - မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပညာရှင်ပီသစွာအီးမေးလ်အသစ် compose ရလွယ်ကူတယ်။
☆လွယ်ကူ EMAIL- AVN အီးမေးလ် application ကို webmail ကိုအစားထိုးအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်။
☆ Optimizer APPLICATION သို့ - အီးမေးလ် applications များအသေးဆုံးမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည် & လျင်မြန်စွာလက်လှမ်းရှိပါတယ်။
ONE အားလုံးကို EMAIL ကို inbox:
- သင်တဦးတည်းထက်ပိုရှိသည် ဂျီမေးလ်အကောင့် နှင့်သင်မကြာခဏ ဂျီမေးလ်ရဲ့ login.
- သင်နေ့စဉ် Outlook နဲ့အီးမေးလ်အကောင့်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
- သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အဆင်ပြေအီးမေးလ်အကောင့်, Hotmail login ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
👉သငျသညျအထကျအားလုံးသည်ရုံဂျီမေးလ် & အားလုံးစာတိုက်ပုံးများ login မှအီးမေးလ် application ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
SMART ကို EMAIL APPLICATION သို့
MULTIPLE ကို EMAIL PROVIDER တွင် - ဂျီမေးလ်နှင့်အတူအီးမေးလ်ထဲမှာ Sign, Outlook, AOL Mail, ချိန်း, Hotmail, တိုက်ရိုက်မေးလ်, Yandex မေးလ်, ရုံး 365 မေးလ်, Mail.ru နှင့်ပိုပြီး။
SMART သတိပေးချက်များကို - အီးမေးလ်အသစ်ရောက်ရှိသည့်အခါအသံသတိပေးချက်အချိန် Customize
ဘာသာရပ်နှင့်အတူရှာဖွေရလွယ်ကူခြင်းနှင့်စစ်ထုတ်အီးမေးလ်, ရက်စွဲ, အခြေအနေ, ပူးတွဲဖိုင်ကို - Fast filter ။
QUICK REPLY - သင့် template ကိုအီးမေးလ်နှင့်အီးမေးလ်။
ပြောင်းလဲခြင်းကို LANGUAGE - ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများသို့ဘာသာစကားများကိုပြောင်းရလွယ်ကူတယ်။
ပြောင်းလဲခြင်းအပြင်အဆင် - အီးမေးလ်လျှောက်လွှာ၏ interface ကိုအရောင်နောက်ခံပြောင်းပါ။
EMAIL ကို GROUP အား - အီးမေးလ်အုပ်စုများ Create နှင့်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။
စာသားထဲမှာလက်မှတ် - လင့်များနှင့်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်ကလက်မှတ်ပေါင်းဖန်တီးပါ။
စာဝှက်ထားတဲ့ဒေတာတွေကို - ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်အပေါ်အီးမေးလ်, ပေးပို့ခြင်းကိုလက်ခံရရှိ & သိုလှောင်မှုစဉ်အတွင်း။
APPLICATION သို့ LOCK - ဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှောက်လွှာအတွက် logging အခါ။
ဂျီမေးလ်, Outlook, ချိန်း, တိုက်ရိုက်မေးလ်, Yandex, mail.ru, iCloud, Web.de, Qip: အ AVN အီးမေးလ်ကလျှောက်လွှာနှင့်အတူသင်အပါအဝင်တစ်ချိန်တည်းမှာကွဲပြားခြားနားသောအီးမေးလ်ကအမျိုးအစားများ, login နိုင်ပါတယ်။
အခမဲ့အီးမေးလ် APPLICATION သို့
အဆိုပါ AVN အီးမေးလ် application ကိုကျနော်တို့အသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းချင်လုံးဝအခမဲ့ဟာ android အီးမေးလ်က App ဖြစ်ပါတယ်။
EMAIL ကို APPLICATION သို့အဆက်အသွယ်အမည်များနှင့်တုံ့ပြန်ချက်
ကျနော်တို့ကကျေးဇူးတင်နှင့်အီးမေးလ် apps များနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို '' တုံ့ပြန်ချက်နားထောင်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်: avndevstudio@gmail.com သို့မဟုတ် avnsoftware@hotmail.com
အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ်များအတွက်မြန်ရဲ့ login & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
9.70 ကို MB
AVNSoftware Inc က
အဆက်အသွယ်များ, ဖုန်းခေါ် ...
ဆန့်ကျင် Theft နှိုးစက် ...